० गौर नगरपालिकामा रहेको राईस मिलको विषयमा देखिएका विवाद के हो ?
— यसमा विवादको कुनै कुरै छैन । गौर नगरपालिकाले राईस मिलको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया धेरै अगाडि देखि नै बढाइसकेको छ । यसमा लाग्ने मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छु । यो मुआब्जाको रकम हामीलाई दिनू, हामी त्यस जग्गालाई गौर नगरपालिकाको नाममा गराएर खेलकुद मैदानको रूपमा विकास गछौं भनेका हौं, तर हालसम्म बजेट भाषणमा पनि राईस मिलको सम्बन्धमा कुनै रकम विनियोजन भएकोे छैन । यो विषयमा मैले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र अर्थमन्त्री विजय यादवसँग पनि छलफल गरेको हुँ । उहाँहरू यो विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । यसको लागि गौर नगरपालिकाले १÷२ करोड बजेट विनियोजन गर्न लागेको छ । यो जग्गा अतिक्रमण भइसकेपछि गौर नगरपालिकाको नाममा दर्ता हुन्छ र त्यहाँ खेलकुद मैदान बन्छ ।
० राईस मिलको जग्गाको विषयमा तपार्इंलाई अपहरण गर्नेसम्म धम्की आएको भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो नि ?
— केही भूमाफियाहरूले विभिन्न किसिमका जाली कागज बनाई त्यो जग्गालाई बेचबिखन गर्न प्रयासरत थिए । मलाई विभिन्न माध्यमबाट लोभ, लालच, धम्की दिने र त्यो जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियालाई रोक्ने अभिप्रायले विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यो षड्यन्त्रले गर्दा मेरो मनोबल झन् उँचो भएको छ । म जसरी भए पनि गौर राईस मिलको जग्गा अधिग्रहण गराएरै छाड्छु र नगरवासीलाई समर्पित गर्छु । भूमाफियाहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । मलाई गौर नगरवासीको पूरै साथ र सहयोग छ ।
० तपाईंलाई धम्की दिने व्यक्ति चाँहि को हुन् ?
— एउटा विजय यादव भन्ने व्यक्ति छ जसको डकुमेन्ट हेर्दा यो राईस मिलसँग कुनै सम्बन्ध देखिंदैन । यो एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र हो । गौरको मेयर भनेको लोकप्रिय मान्छे हो, झन् राईस मिल अधिग्रहण गरिसकेपछि अझ लोकप्रिय हुने डरले राजनीतिक विरोधीहरू पनि मलाई बदनाम गर्न लागिपरेका छन् ।
० विजय यादव भन्ने व्यक्तिले त्यो जग्गा खरिद गर्नका लागि तपाई लगायत अन्य १÷२ जनालाई लाखौं रूपियाँ दिएको भनेर सार्वजनिक रूपमै बताएका छन, यो सत्य हो ?
— जुन व्यक्तिसँग मेरो कहिल्यै भेट नै भएको छैन, कुनै विषयमा आजसम्म छलफल भएकै छैन उसँग राईस मिलको विषयमा छलफल हुने सवाल नै आउँदैन । यदि उनले त्यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडि रहेको छ भने प्रमाण पेश गर्नु प¥यो । जहाँसम्म पैसाको लेनदेनको विषय हो, या त अझ टाढाको कुरा भयो । विजय यादव भन्ने मान्छेसँग मेरो कुनै विषयमा कुरा भएकै छैन ।
० यस्तो किसिमको आरोप लगाउनुको पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ ?
— विगतमा पनि यो राईस मिलको विषयमा विभिन्न कुराहरू बाहिर आएकै हो । अहिले पनि यस्ता भूमिफायाहरू मेरो विरोधी मानिसहरूसँग मिलेर मलाई बदनाम गराई यो जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया रोक्ने पर्यत्न गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको प्रत्यन कहिले पनि सफल हुँदैन ।
० राईस मिलको जग्गा कति छ ?
— ५ बिघा १९ कठ्ठा छ ।
० त्यो राईस मिल कहिले स्थापना भएको थियो र कहिले बन्द भयो ?
— राइस मिल २००३ मा स्थापना भएको हो । २०१८ सालमा सुरू भएको हो र २०३३ सालमा बन्द भएको हो । त्यसको सबै सेयर धनीहरूको मृत्यु भइसकेको छ र त्यो खेल मैदान कै रूपमा गौर नगरवासीले उपयोग गरिरहेका छन् । जिल्लाभरीका आमसभा, राजनीतिक सभा, गोष्ठी, मेला, महोत्सवहरू त्यहीँ मैदानमा हुने गरेको छ । विगत ५ वर्षदेखि भूमाफियाहरूले विभिन्न नक्कली कागजहरू बनाई त्यो राईस मिलको जग्गा मेरो हो मैले बेच्न पाउँछु भनी अभियानमा लागेका छन् । तर म निर्वाचित भएदेखि नै यो जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा छु र यो जग्गा अधिग्रहण जबसम्म हुँदैन तबसम्म म शान्त भएर बस्दिन ।
० तपार्ईँ मेयर भएपछि आफ्नो नगरमा के–कस्तो कार्य गर्दै आउनुभएको छ ?
— म निर्वाचित भएदेखि नै मैले यो नगरको सरसफाईलाई प्रमुख ध्यान दिएको छु । गौर नगरपालिका विगत भन्दा धेरै सफा भएको छ । भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरेको छु । सामाजिक विकासको क्षेत्रमा हामीले विभिन्न तालिम गराई आयमूलक, सीपमूलक, महिला हिंसा विरूद्ध लगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गराइ रहेको छु । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत अतिआवश्यक क्षेत्रमा सुधारको लागि मैले पहल थालेको छु । गौरलाई धर्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित गर्र्न हाम्रो योजना रहेको छ र त्यस अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौं र बाँकी रहेका काम म आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्नेछु ।
० युवाहरूको लागि के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
— पढेलेखेका युवाको लागि गौर नगरपालिकाले निःशुल्क लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । सीप सिक्न चाहनेहका लागि हामीले विभिन्न सीपमूलक केन्द्र पनि खोलेका छौं । एकातिर हामी युवालाई विभिन्न तालिम मार्फत दक्ष बनाउने प्रयासमा छौं भने अर्कोतिर वेरोजगार युवालाई रोजगार पनि दिइरहेका छौं । गौर नगरपालिका युवाको सवालमा एकदम सचेत छ ।
० त्यहाँको विकासका लागि के–कस्ता चुनौतीहरू देख्नुभएको छ ?
— विकास नै एउटा चुनौती नै हो । विकासको लागि प्रत्येक जनताको सहभागिता स्वामित्व र सहयोग चाहिन्छ । हाम्रो सक्दो प्रयास छ, गौर नगरपालिकाद्वारा भएका विकासलाई आम नागरिकले यो हाम्रो विकास हो यसमा हाम्रो सहभागिता छ भनेर सोच्नुपर्छ । केही चुनौतीहरू पनि छन्, त्यसलाई हामी चिर्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट अगाडि बढ्छौं ।